ကိုဗစ် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ မ‌အောင်မြင်ခဲ့ရင် နောက်တဆင့်ဆုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်များ – Myanmar
September 30, 2020 admin News, Story 0
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကိုဗစ် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ မ‌အောင်မြင်ခဲ့ရင် နောက်တဆင့်ဆုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်များ..
ကပ်ရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်ရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် ရောဂါရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပညာရှင်တွေက (၃) ခုစဉ်းစားပါတယ်.. ရောဂါရယ်.. လူရယ်.. ပတ်၀န်းကျင်ရယ်ပေါ့.. လက်ရှိ ကိုဗစ် ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်.. ရောဂါပိုးက ကျွန်တော်တို့ပတ်၀န်းကျင်မှာရှိနေပြီ.. လူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကာကွယ်‌ဆေး မပေါ်သေးဘူး.. လူတွေကို ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့က အချိန်အများကြီးယူရအုံးမယ်.
လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုကြည့်ရင် အရင်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူး.. ရှိတဲ့အားနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာပါ.. အဲဒီလိုအခြေအနေကနေ ကိုဗစ် ဖြစ်လာတယ်.. ၆ လလောက်ကြာလာပြီ.. ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေဟာ တော်ရုံတန်ရုံစိတ်ဓါတ်နဲ့ဆို ဒီလောက်တောင့်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ လေးစားစရာကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလဲ လူသားတွေပါပဲ.. သရေးကွင်းလို့ပေါ့ ဆွဲပါများလာတော့ ပြတ်ဖို့ဖြစ်လာမှာပါ.
နောကတြဆငြ့ဆုတရြငြ ဘာဖှဈမလဲ.. ကနွြးမာရေးဝနထြမြးတှကေ ဆေးဆကကြုနမယြေ.. ဒါပမေဲ့ ပိုးတှေ့တိုငြး ဆေးရုံတငမြှာမဟုတတြော့ဘူး.. အိမမြှာပဲနရမှောဖှဈတဲ့အတှကြ ပိုးတှတေဲ့လူနာက တာဝနယြူမှုပိုမွားလာမှာပါ.. အဲဒီအတှကြ အကွိုးဆကကြဘာဖှဈလာနိုငလြဲဆိုရငြ သဆေုံးေးတှသခွောပေါကမြှငြ့လာမယလြို့ ပညာရှငတြှကသေုံးသပထြားပါတယြ.. ကာကှယဆြေးစောစောရရငတြော့ သကသြာပါ့မယြ.. အဲဒီလိုမဟုတခြဲ့ရငတြော့ သဆေုံးတဲ့နှုနြးကို အတိုငြးအတာတခုထိတော့ လကခြံပေးရတော့မှာပါ.. အထူးသဖှငြ့တခှားသောရောဂါအခံရှိသူတှေ အသကဆြုံး ရှုံးရခွမွေားလာမှာပါ.
ဒီအခြေအနေကိုမရောက်ဖို့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရက အစွမ်းကုန်ကျိုးစားနေတာပါ.. ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုက မလိုက်နာရင် သူတို့လဲတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုဗစ်တိုက်ပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက ပြည်သူတွေပါ..